Breaking News घाटि रे**टेर १ जनाको ह**त्या भयपछी आ'त्तियो सरकार,बढायाे दोब्बर शुर'क्षाकर्मी हेर्नुस -
Home News Breaking News घाटि रे**टेर १ जनाको ह**त्या भयपछी आ’त्तियो सरकार,बढायाे दोब्बर शुर’क्षाकर्मी...
Breaking News घाटि रे**टेर १ जनाको ह**त्या भयपछी आ’त्तियो सरकार,बढायाे दोब्बर शुर’क्षाकर्मी हेर्नुस
लन्डन — नेपाली सेफ सन्तोष साह अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त ‘बीबीसी मास्टर सेफ प्रोफेसनल्स २०२०’ प्रतियोगिताको फाइनल राउन्ड प्रवेश गरेका छन् । ‘बीबीसी वान’ मा बिहीबार बेलुका प्रसारित सेमिफाइनल राउन्डमा मौलिक नेवारी परिकार योमरी चखाएर उनी शीर्ष ६ स्थानसहित फाइनल राउन्ड पुगेका हुन् ।
प्रतियोगितामा सहभागी कुल ३२ व्यावसायिक सेफमध्ये विभिन्न चरण पार गर्दै टप ६ सम्मको यात्रा तय गर्न सफल सन्तोषले यसलाई आफ्नो करियरकै ठूलो उपलब्धि भनेका छन् । ‘मास्टर सेफ प्रतियोगिता मेरो लागि जीवन परिवर्तनको माध्यम बन्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग खुसी साटे, ‘नेपाली खाना विश्व जगत्‌लाई चिनाउने मेरो धोको एक हदसम्म पूरा भएको छ ।
Previous articleभर्ख’रै हेर्नुहोस्, सबै चकित् पार्ने गरि प्रधानमन्त्री गरे यस्तो घोषणा PM Kp Sharma Oli (जानकारीका लागि सेयर गराै)
Next articleकरोडौको पशुपतीको शिवलिंग अमेरिकामा भेटियो, कसले बेचेको थियो ? रह’स्य यस्तो